Akụkọ - Ebee ka enwere ike iji akwa silica dị elu
Akwa akwa silica bụ ụdị akwa okpomọkụ na-eguzogide ọgwụ inorganic fiber. N'ihi na ya siri ike chemical Njirimara, elu okpomọkụ na-eguzogide na ablation eguzogide, na ngwaahịa na-ọtụtụ-eji aerospace, nkà mmụta banyere ígwè, chemical ụlọ ọrụ, ụlọ ihe, ọkụ nchebe na ndị ọzọ na ulo oru ubi. Ihe na-enweghị ike ịgbanwe agbanwe, nke na-eguzogide ọgwụ dị elu (500 ~ 1700 ℃), usoro kọmpat, enweghị mgbakasị, ederede dị nro na ntachi obi.
Ọ dị mma iji kechie ihe na ngwa ngwa. Akwa silica dị elu nwere ike ime ka ihe ahụ ghara ịdị na-ekpo ọkụ ma na-enwu gbaa, ma gbochie ire ọkụ ma ọ bụ iwepụ ọkụ. O kwesịrị ekwesị maka ịgbado ọkụ na oge ndị ọzọ na ọkụ na-adị ọkụ ma dịkwa mfe ịkpata ọkụ. Ọ nwere ike iguzogide icheku ọkụ, slag, ịgbado ọkụ, wdg.
Enwere ike iji ya kewapụ ebe ọrụ, kewaa ọrụ na-arụ ọrụ, ma kpochapụ ihe egwu ọkụ nke nwere ike ibute na ọrụ ịgbado ọkụ; enwere ike iji ya dị ka mkpuchi mkpuchi iji guzobe ebe nchekwa dị ọcha, dị ọcha ma tozuru oke. Enwere ike ime akwa akwa silica ka ọ bụrụ blanketị ọkụ, nke bụ ngwa ọrụ nchekwa dị mma maka ngalaba dị mkpa nke nchekwa ọkụ ọhaneze.
A na-eji ya na nnukwu ụlọ ahịa, nnukwu ụlọ ahịa, ụlọ nkwari akụ na ebe ntụrụndụ ndị ọzọ maka ọha na eze maka ịrụ ọrụ ọkụ (dị ka ịgbado ọkụ, ịcha, wdg). Ngwa nke blanketị ọkụ nwere ike belata nchapu ọkụ, wepu ma gbochie ngwongwo na-agbawa agbawa na ihe mgbawa, ma hụ na iguzosi ike n'ezi ihe nke ndụ mmadụ na ụlọ ọrụ.
Ekwenyere m na ị ga-enwe nghọta ọhụrụ na nghọta akwa akwa silica ka ị gụchara. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere nke a, ị nwere ike ị paya ntị na weebụsaịtị anyị, na-enwe olileanya inyere gị aka.